Ganacsatada qaadka Kiiniya oo cabasho oohina ka keenay diyaarad Hargeysa u socotey - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Dhawaan ayay ahayd markii diyaarad qaad u wada maamulka Muuse Biixi laga celiyay hawada, ayadoo markii hore loo sheegay in ay soo geli karto hawada Somaliya, iyadoo sida qaad. Qaadka ayaa ka mida aaladaha aan la ogoleyn in dalka soo galo.
Haddaba ganacsatada Kiiniya ee khasaaruhu ka soo gaaray qaadka hawada ka soo celiyay ayaa cabasho oohina u gudbiyay saxaafada dalkooda. ” Waxaan khasaarney 30 kun oo doolar oo ah lacagta qaadka iyo dhoofistiisa ayuu yiri ni u hadlay ganacsatada.
“Waxaanu oggolaansho ka helnay hey’adda duulista rayidka ee maamulka Muuse Biixi, waxwalbana sidii la rabay ayay ku socdeen ilaa markii dambe diyaaradda ay gashay hawada Soomaaliya, duuliyihii diyaaraddana lagu yiri waxaad sidaa shixnad sharci darro ah ee dib u laabo,”ayuu raaciyay oo cabsho ooyay khasaaraha dartii.
Kiiniya waxay dhowr mar jebisay sharciga duulista ee dala ayadoo diyaarado badan soo gelisay dalka xilli hawada xiran tahay. ” Waxa niyada looma hayo qaadka iyo diyaaradaha ka imanaya Kiiniya.